ပွင့်လင်းရာသီတွင် ပုဂံညောင်ဦးဒေသရှိ ဘုရားပုထိုးစေတီများသို့ ဘုရားဖူးများ လာရောက်မှု များ? - Yangon Media Group
ပွင့်လင်း ရာသီရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သော ကြောင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပုဂံညောင်ဦးရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေဒေသရှိ သမိုင်းဝင်တန်ခိုးကြီးဘုရားပုထိုးစေတီများ၌ ပြည်တွင်းပြည်ပဘုရားဖူး ခရီးသွားဧည့်သည်များဖြင့် စတင်စည်ကားလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဘုရားဖူးခရီးသွားဧည့်သည်များသည် ပုဂံညောင်ဦးရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေသို့ ရေလမ်း၊ လေလမ်းနှင့်ကုန်းလမ်းခရီးများဖြင့် လာရောက်ဖူးမြော်ကြသည့်အပြင် ဘုရားဖူးခရီးသွားဧည့်သည်များ စိတ်အပန်းဖြေနိုင်ရန်နှင့် ဆင်များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရှိစေရန် အတွက် ညောင်ဦးမြို့နယ် ပလင်းကျေးရွာ အနီးပလင်းကမ်းသာယာဆင်စခန်း၌လည်း အပန်းဖြေလည်ပတ်နိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားသည်။
”ပုဂံညောင်ဦးရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေဟာ အခုဆိုရင် ခရီးသွားရာသီချိန် ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်လို့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဘုရားဖူး ဧည့်သည်တွေ အများအပြားလာ ရောက်ဖူးမြော်နေကြပါပြီ။ ကျွန်မတို့ဒေသက အမှတ်တရပစ္စည်းအ ရောင်းဆိုင်တွေ လုပ်ငန်းအဆင်ပြေ ကြပါတယ်”ဟု အာနန္ဒာဘုရားအနီး၌ အမှတ်တရပစ္စည်းရောင်းချသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ အတွင်းကလည်း ဘုရားဖူးဧည့်သည်များ အလာများသည့်အတွက် ဘုရားပုထိုးစေတီများ၌ ရောင်းချနေသည့် ဈေးဆိုင်များ အရောင်းအဝယ်ကောင်းနေပြီး ဘုရားဖူးဧည့်သည်အများစုသည် လူသိများသည့် သမိုင်းဝင်တန်ခိုးကြီး ဘုရားများဖြစ်သည့် တုရင်တောင်၊ ရွှေစည်းခုံ၊ လောကနန္ဒာ၊ တန့်ကြည် တောင်၊ ထီးလိုမင်းလို၊ အလိုတော် ပြည့်၊ သဗ္ဗညု၊ ဗူးဘုရား၊ ကန်တော့ ပလ္လင်၊ မနူဟာ၊ မြစေတီ၊ ဓမ္မရာ ဇက၊ ဓမ္မရံကြီး၊ စူဠာမဏိ စသည့် တန်ခိုးကြီးဘုရားများသို့ သွားရောက် ဖူးမြော်ကြသည့်အပြင် ဘုရားဖူးအ ချို့မှာလည်း ဆုတောင်းပြည့်ရန်အ ဓိဋ္ဌာန်ဖြင့် စွယ်တော်လေးဆူကို အဓိက ထား နေ့ချင်းပြန်သွားရောက်ဖူး မြော်ကြကြောင်း သိရသည်။
”အဆိုတော် အသစ်လေးတွေနဲ့ ပြိုင်ပွဲကလာတဲ့ အဆိုတော်လေးတွေ တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေကို ကိုယ်ချင်းစ??
ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မရှင်နှင့် UNFC အကြား စကားလုံး တစ်လုံးကြောင့် NCA လက်မှတ် မရေးထိုးနိုင်သေြး?